आज अप्रिल फुल ! के हो अप्रिल फुल,किन मनाइन्छ ? – hamrosandesh.com
आज अप्रिल फुल ! के हो अप्रिल फुल,किन मनाइन्छ ?
भोली अंग्रेजी पात्रोको अप्रिल १ तारिख । पश्चिमा संस्कृति अनुसार यो दिनलाई अप्रिलफुल अर्थात झुक्याउने दिनका रुपमा मनाइन्छ । साथै यो दिनलाई विश्व मुर्ख दिवसको रुपमा मनाउने गरिएको छ ।
पछिल्लो समय यो दिन सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले झूठा तर ठट्यौलीहरु पोष्ट गर्छन् । अप्रिलफुलको शुरुवात सन् १५८२ मा पोप चाल्स नवौंले पुरानो क्यालेन्डरको स्थानमा नयाँ रोमन क्यालेन्डर अर्थात् पात्रो लागू गरेपछि भएको हो । शुरुमा नयाँ सालको रुपमा अप्रिल १ लाई लिने गरिन्थ्यो । तर सन् १५८२ मा यसलाई बदलेर नयाँ वर्षको पहिलो दिनका रुपमा १ जनवरीलाई कायम गरियो ।
के हो अप्रिलफुल ?
अप्रिल र मूर्खताबीचको सम्बन्धको पहिलो अभिलेख चान्सर के क्याटरबरी टेल्स (१३९२) मा पाइन्छ । कतिपय लेखक १६औँ शताब्दीमा जनवरी १ लाई नयाँ वर्षका रूपमा बाहेक अर्को विदाको दिन बनाउन यसको सुरुआत गरिएको बताउँछन् । तर, यो सिद्धान्तले पुरानो सन्दर्भको उख्ल्लेख गर्दैन । यो पुस्तकको एउटा कथा नन्स प्रिस्टस टेलका अनुसार बेलायतका राजा रिचार्ड द्वितीय र बोहेमियाकी रानी एनीका बीचमा विवाह हुने हल्ला गरियो र मिति ३२ मार्च तोकियो ।
जसलाई त्यहाँको जनताले साच्चै ठाने र मूर्ख बने । त्यही वेलादेखि ३२ मार्च अर्थात् १ अप्रिललाई अप्रिल फुल डेका रूपमा मनाउन थालियो । एक अर्को कथाअनुसार, प्राचीन युरोपमा नयाँ वर्ष १ अप्रिलमा मनाइन्थ्यो । सन् १५८२ मा पोप ग्रोगोरी १३ ले नयाँ क्यालेन्डर अपनाउन निर्देशन दिए, जसअनुसार जनवरी १ मै नयाँ वर्ष हुन्थ्यो । त्यति हुँदा पनि कतिपयले अप्रिल १ लाई नै नयाँ वर्ष मनाइरहेका थिए ।
यसरी अप्रिल १ मा नयाँ वर्ष मनाउनेलाई जनवरी १ मा नयाँ वर्ष मनाउनेले मूर्ख ठान्न थाले र उनीहरूको मजाक उडाए ।१९१५ को कुरा हो, जब जर्मन विमानस्थलमा एक बेलायती पाइलटले ठूलो बम फाले । यो देखेर मानिसहरू यत्रतत्र भागे, धेरै समयसम्म मानिसहरू लुकेर बसे । तर, धेरै समय बित्दासमेत जब कुनै विस्फोटको आवाज आएन, तब मानिस फर्केर त्यो बम हेर्न आए ।
त्यहाँ एउटा ठूलो फुटबल थियो, जसमा ‘अप्रिल फुल’ लेखिएको थियो । यस्तो पनि भनिन्छ कि, पहिले भारतवर्षकै क्यालेन्डर संसारभर मानिन्थ्यो । जसअनुसार नयाँ वर्ष चैतमा अर्थात् अप्रिलमा पर्दथ्यो । १५८२ मा पोप ग्रोगोरीले नयाँ क्यालेन्डर ल्याएपछि त्यसलाई धेरैले मान्न थाले ।